Iprofeto kaYesu Kristu, umzobo ophakathi
UYesu waseNazarete-nguKristu, "Othanjisiweyo," okanye "uMesiya." Igama elithi "uYesu" livela kwigama lesiHebhere-Aramaic elithi " Yeshua ," elithetha ukuba "uYehova [iNkosi] usindiso." Igama elithi "uKristu" ngokwenene ligama likaYesu. Livela kwigama lesiGrike elithi "Christos," elisho "uMthanjiswa," okanye "uMesiya" ngesiHebhere.
UYesu ungumntu oyintloko phakathi kobuKristu. Ubomi bakhe, isigidimi, kunye nobulungiseleli kubhalwe kwiiVangeli ezine zeTestamente eNtsha .
Ininzi abaphengululi beBhayibhile bayavuma ukuba uYesu wayengumfundisi ongumYuda waseGalili owenza imimangaliso emininzi yokuphilisa nokukhululwa. Wabiza amadoda angama-12 amaYuda ukuba amlandele, asebenze kunye nabo ukuqeqesha nokulungiselela ukuba baqhubeke beshumayela.
UYesu Kristu wabethelwe eYerusalem ngomyalelo kaPontiyo Pilato , urhuluneli waseRoma, ngenxa yokubiza ukuba nguKumkani wamaYuda. Wavusa iintsuku ezintathu emva kokufa kwakhe, wabonakala kubafundi bakhe, waza wenyuka waya ezulwini.
Ubomi bakhe nokufa kwakhe kwanikela ngomnikelo wokuhlawulela izono zehlabathi. Umntu wahlukana noThixo ngenxa yesono sika-Adam, kodwa waxolelana noThixo ngedini likaYesu Kristu. Uya kumbiza uMtshakazi , ibandla, kwaye emva koko abuyele kwiCawa yesiBili ukuza kugweba ihlabathi aze amise ubukumkani bakhe obungunaphakade, ngoko uzalisekisa isiprofeto sobuMesiya .
I mpu melelo
Ukufezekiswa kukaYesu Kristu kuninzi kakhulu ukuluhlu. Wakhulelwe nguMoya oyiNgcwele , waza wazalwa yintombi.
Wahlala ubomi obungenasono. Wajika amanzi abe yiwayini , waphilisa abaninzi abagulayo, izimpumputhe kunye neziqhwala, waxolela izono, wandisa iintlanzi kunye nezonka ezondla amawaka ngaphezu kwesinye isihlandlo, wahlangula idemoni, wahamba phezu kwamanzi , wazolisa ulwandle, wavusa abantwana kunye nabantu abadala ukusuka ekufeni baye ebomini.
UYesu Kristu wamemezela iindaba ezilungileyo zoBukumkani bukaThixo .
Wabulala ubomi waza wabethelelwa esiphambanweni . Wehla esihogweni waza wathatha izitshixo zokufa nesihogo. Wavusa kwabafileyo. UYesu Kristu wahlawulela izono zehlabathi waza wathenga ukuxolelwa kwabantu. Wabuyisela ubuhlobo bomntu noThixo, evula indlela eya ebomini obungunaphakade . Ezi zimbalwa zezinto zakhe ezingavamile.
Nangona kunzima ukuyiqonda, iBhayibhile ifundisa kwaye amaKrestu akholelwa ukuba uYesu unguThixo, okanye uEmanueli , "UThixo unathi." UYesu Kristu uye wahlala ekhona kwaye wayehlala nguThixo (uYohane 8:58 no 10:30).
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa malunga nobuqaqawuli bukaKristu, tyelela esi sifundo semfundiso ka-trinity .
Kwakunzima ukuyiqonda, kodwa iBhayibhile ifundisa kwaye amaKristu amaninzi akholelwa, uYesu Kristu wayengenguThixo ngokupheleleyo, kodwa umntu opheleleyo. Waba ngumntu ukuze akwazi ukubonakalisa ubuthakathaka bethu, kwaye kubaluleke kakhulu ukuze anike ubomi bakhe ukuhlawula isohlwayo sezono zethu (Yohane 1: 1,14; Hebhere 2:17; Abafilipi 2: 5 -11).
Khangela olu xwebhu ngolwazi olungakumbi malunga nokuba kutheni uYesu efa .
Kwakhona, izifundo ezivela ebomini bukaYesu Kristu zininzi kakhulu ukuba zingabonakali.
Uthando oluntu, inkunzi, ukuthobeka, ukunyaniseka, ubukhoboka, ukuthobela nokuzinikela kuThixo kukunye kwezifundo ezibalulekileyo ebomini bakhe.
UYesu Kristu wazalelwa eBhetlehem yaseYudeya waza wakhula eNazaretha yaseGalili .
UYesu ukhankanywe ngamaxesha angaphezu kwama-1200 eTestamente entsha. Ubomi bakhe, umyalezo kunye nenkonzo kubhalwe kwiiVangeli ezine zeTestamente Elisha : uMateyu , uMarko , uLuka noYohane .
Uyise wasemhlabeni kaYosefu , uYosefu , wayengumchweli, okanye ngumenzi wezakhono zobugcisa. Kungenzeka ukuba uYesu wayesebenza kunye noyise uYosefu njengomchweli. Kwincwadi kaMarko, isahluko 6, ivesi 3, uYesu ubizwa ngokuba ngumbazi.
UBawo waseZulwini - uThixo uYise
UBawo oMhlaba - uYosefu
Umama - uMariya
Abazalwana - uYakobi, uYosefu, uYudas noSimon (Marko 3:31 no 6: 3; Mateyu 12:46 no 13:55; Luka 8:19)
Oodadewethu - Ababiziweyo kodwa bachazwe kuMathewu 13: 55-56 kunye noMarko 6: 3.
I-Genealogy of Jesus : Mateyu 1: 1-17; Luka 3: 23-37.
Yohane 14: 6
UYesu waphendula wathi, "Ndiyindlela, inyaniso kunye nobomi. Akukho mntu uza kuBawo ngaphandle kwam." (NIV)
1 Timoti 2: 5
Kuba kukho uThixo omnye kunye nomlamli omnye phakathi koThixo nabantu, indoda uKristu Yesu ... (NIV)
Kutheni Ukuthobela KuThixo Kubalulekile?
UHerode Antipas - uMququzeleli woKufa kukaYesu
UMariya noMarta: Iingxelo zeNkcazo zeBhayibhile
Yintoni IBhayibhile Eyithetha Ngobugwenxa?
Imiqulu Yomthi Fihla i-Mylar
Ndilinalo Iphupha - Iincwadi Zomntwana Wezithombe
Iiphambili ezi-5 eziphakathi kweenqanawa ze-$ 10,000
Imithetho yeNtetho yaseNtaliyane
IZIMBA ZOKUPHAKATHI KWENKCAZO NEMPILO
Iimpawu zobisi - Yintoni engalunganga ngobisi?
URebheka - Umfazi kaIsake
Ziziphi iingoma ezibonakalayo kwi-Movie Watchtrack?
Indlela yokuLwala kwiFakie kwiStateboard
IiNyanga ezine zeSpanish